warkii.com » Liibiya; Dagaalka magaalada Sirta oo qarka u saaran inuu qarxo iyo…
Liibiya; Dagaalka magaalada Sirta oo qarka u saaran inuu qarxo iyo…
Liibiya tan iyo bilowgii sanadkaan waxaa ka socday dagaal culus oo u dhaxeeyo dowlada Liibiya oo garab ka heleyso Turkiga iyo Maleeshiyaadka Khalifa Xaftar oo dhankooda garab ka helayaan dowlado ay ugu horeeyaan Imaaraatka, Ruushka iyo Masar.
Dagaaladaan oo sababeen in dhul aad u balaaran lagala wareego Maleeshiyaadka Khalifa Xaftar ayaa mudooyinkaan dambe hakad ku jireen balse haatan waxaa socoto saan saanta dagaal culus oo markale qarxi doono.
Sida ay shabakada Al-Jazeera ku warameyso ciidamada Liibiya ayaa heegankii ugu dambeeyay la galiyay ayagoona diyaargarowgoodii ugu dambeeyay ku jira kaasoo ay ku doonayaan iney kula wareegaan gacan kuheynta magaalada Sirta.
Mustafa Al-Mujci oo ah afhayeenka howgalka Fulkaanaha Carada (Burkaan Al-gadab) ayaa sheegay in ciidamada Liibiya uu gurmadkii ugu dambeeyay soo gaaray isla markaasna diyaar u yihiin xoreynta magaalooyinka sirta iyo Al-Jufra.
Sargaalkaan Af-hayeenka ah ayaa dagaal ka qarxo Sirta ku tilmaamay inuu yahay mid hubanti ah si maleeshiyaadka Xaftar magaalada looga xoreeyo isla markaasna uu yahay mid aan laga fursan karin.
Ciidanka Liibiya ayaa weerar culus horay ugu qaaday maleeshiyaadka Xaftar ayagoona magaalooyin badan oo ay ugu caansanyihiin Triboli iyo Tarhuna kala wareegay haatana waxay doonayaan iney kala wareegaan magaalooyinka Sirta iyo Al-Jufra.